Addis Standard ayaa qortay in xabsiga la dhigtay masuuliyiin ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida. – Xeernews24
Addis Standard ayaa qortay in xabsiga la dhigtay masuuliyiin ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida.
5. August 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Wararka saaka naga soo gaaraya Magaalada Jigjiga ee Xarunta Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in Ciidamada Militariga ah ay xabsiga dhigeen qaar ka mid ah madaxda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Ilo ka mid ah Militariga Itoobiya ayaa u sheegay Wargeyska Addis Standard ee ka soo baxa Addis Ababa in Mas’uuliyiinta Xabsiga la dhigay lagu haysto in ay ka dambeeyeen kacdoonkii shalay ay sameeyeen dhallinyarada Magaalada Jigjiga ee sababay dhaca iyo boobka.
Isha la hadashay Addis Standard waxaa ay sheegtay in Madaxweynaha Ismaamulka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar(Iley) la gelin doono Xabsi ay leeyihiin Ciidanka Federaalka islamarkaana muuqaal kooban oo shalay gelinkii dambe laga duubay ay ka duubeen Militariga Itoobiya.
Xadhigga Cabdi Maxamuud Cumar ayaa lagu sheegay in ujeedadiisu tahay in laga hortago dhiig kale oo ku daata Magaalada Jigjiga iyo deegaannada Ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Rabshadihii shalay dhacay kaddib dowladda dhexe ayaa u yeedhay Cabdi Maxamuud Cumar waa uu diiday waxaana uu ku hanjabay in uu jibinaayo qodobka 39-aad ee Dastuurka dalka Itoobiya.
Waxaa kale oo qofka la hadlay Addis Standard uu sheegay in Ciidamada Liyuu Booliska qaarkood xabsiga la dhigay kadib markii ay ka amar qaadan waayeen Madaxweynaha dowlad deegaanka.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/08/Hodeida-9.jpg 459 800 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-05 10:15:092018-08-05 10:15:09Addis Standard ayaa qortay in xabsiga la dhigtay masuuliyiin ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida.
Saaka Magaalada Jigjiga iyo xaalkeega: Dowladda Itoobiya oo gogol nabadeed u dhigtay Jabuuti & Eritrea.